Terror Free Somalia Foundation: Sirdoonka Dowlada Somalia & Shabaab waa isku mid !!!
Maku fakirtay waligaa in labada sirdoon ee dowlada iyo Shabaab ee ku sugan magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa isku mid ah!!!
Cadey ayaan idiin hayaa:-
- 80% ciidanka u qoran Sirdoonka Dowlada Soomaaliya waa kuwa markoodii hore laga keenay dhanka Shabaab ama ku joogo qaab wada hadal.
- Rag badan oo u shaqeeyo dhanka dowlada ahna madax ayaa howshaasi wax ka fuliyo una fududeeyo qaraxyada sida: dharka ciidanka iyo gawaarida.
- Marka uu qarax dhaco oo baaritaano ay sameeyaan wariyaasha qaar waxaa dhacdo in hadana qalalaaso ka dhan ah wariyaasha la keeno sida lagu wariyaal badan oo aan usoo joogay kuna jiray sidii ay ku ogaan lahaayeen amaan xumida ka jirta xamar cida ka danbeysa.
- Qarixii maxkamada gobolka Banaadir, UNDP, madixii Sirdoonka Qadar lagula eegtay KM4, Safaarada Turkiga waxa ay wada ahaayeen kuwa si qorsheysan u dhacayay ayadoona guud ahaan amaanka wadooyinkaasi ay ahaayeen kuwa la adkeeyay? Maxay wali usoo saari weyday dowlada bayaan cad oo kala cadeyna wixii dhacay ama marka laga reebo in Shabaab ay dhanka warbaahinta ka sheegaan in ay ka danbeeyeen?
Sida aynu ka warheyno qaraxyada iyo dilalka ka dhaca magaalda Muqdisho wixii ka danbeeyay markii xilka madaxweynimo loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ahaa kuwa qorsheysan ayadoona fal walba lagu qaarijinayay qof masuul ah goob mucayan ah iyo waliba siyaasad dhameystiran.
Wasaaradaha dowlada Soomaaliya ee loogu talagay in ay ilaaliso sugtana amaanka shacabka ayaa marka uu dhaco fal ceynkaasi oo kale ugu danbeyntii kusoo xira “ waan qabaneenaa cidii ka danbeysay falkasi iyo warar aan ka dagin shacabka Soomaaliyee”.
Dowlada Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in ay ka hor tagto amaan xumida ka jira wadanka ayadoona dowlada Turkigana ay tahay dowlada kaliya ee haatan dadka wax la taaban karo u haya shacabka Soomaaliyeed taas waa wax cad haba jiraan siyaasad qarsoon oo ay leedahay Turkiga hadan waxaa inooga muhiimsan waxa ay shacabkeena u qabanayaan: ha ahaato gargaar, waxbarasho iyo waliba dhanka caafimaadka oo ay xamar ka sameeyeen goobo badan oo caafimaad ah.
Dhibkii dhacay looma kala harin hadana shacabka Soomaaliyeed ayaa in muda ah ku dhaxjiray siyaasado iyo danooyin kala gadisan oo midba xawaara gaar ah kusoconayay waxa ayna keentay in dad badan oo Soomaali ah ay ku dhintaan gudaha iyo dibada ayadoona ay ugu xumeed kuwa ilaa haatan ku dhamaanaya biyaha Yurub iyo Afrika u dhaxeeya qaar ayaa ku jiro xabsiyo qaarna lamaba oga meel ay jaan iyo cirib dhigeen Ilaahay u naxariisto Shacabka Soomaaliyeed oo markaan ka daalay colaad iyo dano shisheeye.
terror free Somalia, Mogadishu Somalia
Posted by rahm Warsame at 4:39 PM